I-22nd China (Guangzhou) International Architectural Decoration Expo izoqhubeka nokubamba iqhaza phezulu kwesibhengezo sokuqanjwa kwamasu amasha nokuvikelwa kwemvelo, ibeke isibonelo embonini yokwakha izinto zokwakha, ukuvumela ukongiwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo okuyisiqondiso sokuthuthuka kwezinto zokwakha, okwamanje " isikhathi sombukiso ”, naka umbukiso, uhlanganyele ngokuzikhandla embukisweni, ube yindlela entsha yokuthola imininingwane yemakethe.
IGuangzhou Expo izolandela umgomo “wesakhiwo esihlobene, ukuthenga okungcono”, ukuze amazinga ahlukene nabathengi abahlukene bakwazi ukuqoqa izinhlobo zomkhiqizo, imikhiqizo, ubuchwepheshe nolunye ulwazi, basebenzise ngokugcwele umqondo wokuthuthuka “ogcwele nongcweti”. Ngasikhathi sinye, ukwenziwa okuhle kwesakhiwo sababukeli kwenza ikhwalithi yonke yombukiso ithuthuke, kuhlangatshezwane nezidingo zalombukiso ukwandisa ukuthengisa kwasekhaya nokwandisa imakethe.I-22nd China (Guangzhou) International Architectural Decoration Expo izoba ngoJulayi 8 -11,2020.
Izicabha zaseShang Finzone nezinkampani zamawindows njengenkampani eyaziwayo yezicabha neyamawindows enolwazi oluningi kwababukeli, sigxila embonini yezicabha neminyango iminyaka eminingi, imikhiqizo ebabazekayo eminyango yengilazi engenasici namafasitela, iminyango yebhuloho le-aluminium ephukile neminyango. i-gazebo, umthunzi, indawo yokuphumula, igumbi lokukhanya kwelanga, isibhakabhaka, nolunye uchungechunge, imikhiqizo eminingi, izokunikeza ngesevisi ehlukaniswe kakhulu, insizakalo enobuchwepheshe kunayo yonke. Ngokukhethekile, sinomugqa womkhiqizo wakamuva nowaziwa kakhulu wemakethe. wena ukubukwa okuhle kakhulu, okukhanyayo futhi okuphephe kunazo zonke, futhi, sinomkhakha waminyaka yonke wokukhiqiza wamamitha skwele angaphezu kuka-800,000 wohlelo lwe-balcony glazing system.
Ngenxa yomthamo wethu omkhulu wokukhipha, sithumele imikhiqizo yethu kwabaningi
izimakethe zomhlaba wonke kubandakanya iChile, iRussia kanye neNingizimu mpumalanga ye-Asia…
IShanghai Finzone i-balcony glazing izothamela i-THE 22TH CHINA (GUANGZHOU) INTERNATIONAL BUILDING & DECORATION FAIR ukusuka ngomhlaka 7 kuye ku-11 kuJulayi.
Sizokhombisa imikhiqizo emisha ehlukahlukene ngaleso sikhathi futhi silangazelele ukuhlangana nawe.